Izinto eziluncedo nezingeloncedo ejolise kwikona iintlobo kwi pa parlour
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Izinto eziluncedo nezingeloncedo ejolise kwikona iintlobo kwi pa parlour
Kwiminyaka yakutshanje, siye inani elandayo, nesendlu pa ukufaka ikona ezahlukeneyo. icala Ngokuqhelekileyo, siye saseka ngasecaleni a iiyunithi ezimbalwa le modeli, kwi Ezahlukeneyo yembombo, nayo iye yaseka eyahlukileyo ngokupheleleyo umfuziselo iinkcukacha nganye nganye. Xa abadume kwakukho imifuziselo, ngokwaneleyo ukuba ezintlanu kwakhona efakiweyo ezintandathu, ngenxa yezizathu ezifana zithandwa akukho msebenzi akuthethi unamathele, umfuziselo ukuba akukho ukunika ukukhetha kodwa ukususa; kubathengi abafuna ukudlala kunjalo, okanye avunyelwe ukuba ushiye iiyunithi kuphela nje ezimbalwa, ukuba unalo kwikona ezahlukeneyo okanye wavuka udlala nostalgic ukwazisa itafile kusetyenziswa. E
, onjalo lembombo iintlobo, iinzuzo nezingeloncedo ajolise, siza kujonga izinto kuyo.
Okokuqala, le inzuzo, kodwa andazi kakuhle ingongoma ukhetho kunye pa iintlobo iimodeli kuba ezimbombeni zidlala abaninzi, kukuba kulula nakoodyakalashe. Ukongezelela, idla ngokuba uhlengahlengiso iinzipho esimnandi, bekuya ukudlala Akumangalisi.
Ezahlukahlukeneyo yembombo, de umatshini ophezulu zezirhubuluzi ukusuka Dejihane, kukho iindidi ngeendidi imifuziselo iinkcukacha. Ngaphambili, kodwa Dejihane ofakiweyo amaninzi, Izilimo endilisekileyo umatshini ophezulu zezirhubuluzi ngoku. Ezahlukeneyo yembombo, ngoko idla ngokuba uhlengahlengiso isikhonkwane elithozamisayo kunezinye imifuziselo, abo Ubethwe ngubani na umatshini Hanemono, ngubani Hanemono esele ifakiwe kule Ezahlukeneyo yembombo, kuya ngokungalindelekanga okanye amehlo injongo ukuba babuyele kakuhle.
and Ezahlukeneyo yembombo, kukho kwakhona elibe pa ukuba rookie isikhonkwane artist ukuqala nje uhlengahlengiso isikhonkwane na ophetheyo, khon 'ukuze ufumane itafile ubutyebi engalindelekanga Kukho kweso ngaphezu kweyesiqhelo nail hlengiso Igqala iinzipho abongikazi ndibaxabele na, abantu abahamba ngayo kwiziko Hanemono ke amehlo injongo.
Ukongeza, abo badlala kunye kwikona ezahlukeneyo, sinabantu abaninzi kakhulu abayazi pa. In
kutshanje, ngoko okanye abe imisebenzi enzima efana engenamnini amathuba ukwahluka, wena okanye wayeka ngaphandle kwesaziso naleyo iqulethwe bazimele. Ingaba kungenzeka kakhulu ukuba banxibe na itheyibhile enjalo Ephakamileyo kukuthi, wena ikona ezahlukeneyo.
kunye, njengoko neengxaki, ukufikelela kunye nokusebenza womzekelo nganye, nokuba oko kufuneka kukhunjulwe ngokunjalo zonke ezahlukeneyo, ngoko Dejihane baninzi, oko kukuba akukho specs kakhulu indlela ukuthi ingaba umdlalo. E Ezahlukahlukeneyo yembombo, imifuziselo saa kwamanye amalwimi ezifakiweyo kwi ngamnye. Ngoko ke, zonke zenza ezahlukeneyo.
apho ukufikelela, nokuba iqondo eliphezulu ukuthembeka kufikelela, kufuneka ukuba ukhumbule ukuba komsebenzi, akayi kuphinda kwazi kwanaxa ime silulandlo waqhubeka. Ukuba ayaziwa konke konke, nkqu ukuma ebheka kakuhle akukho luhlenga iinzipho enoba, elungileyo Horukon iseti, nokuba ndiziva naloo ROM kukuba ukhangeleka emhle, uya kuphoswa izikhululo umdlalo.
Ke ethetha ngeentlobo, nesendlu ezininzi pa ukuba ukudlala i yeyona njongo iphambili, oko ekugqibeleni iba ufakelo eninzi Dejihane. Ukuba
Dejihane, kuba mnandi yaye uhlengahlengiso encinane nail, kuba buthathaka amandla iziqhushumbisi ze-intlawulo, akukho kuyoyikisa njengoko elibe pa.
isishwankathelo Hanemono, abantu abo Tachimawa 'kwiziko Dejihane yi uzame loya kwakhona Ezahlukeneyo yembombo? Kuya kuba kwisigqibo sokuba. Ukuba, abaninzi pa parlour leyo yeyona njongo iphambili umdlalo, ekugqibeleni ukwandisa inani kokufakwa Dejihane. Ukuba
isishwankathelo Hanemono, abantu abo Tachimawa 'kwiziko Dejihane yi uzame loya kwakhona Ezahlukeneyo yembombo? Kuya kuba kwisigqibo sokuba.